पूर्वमन्त्री भन्छन् ‘भ्रष्टचारीलाई घुँडा मुनि गोली हाने सरकारको जयजयकार हुन्छ’ – Jana Prashasan
पूर्वमन्त्री भन्छन् ‘भ्रष्टचारीलाई घुँडा मुनि गोली हाने सरकारको जयजयकार हुन्छ’
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रबीन्द्र श्रेष्ठले भ्रष्टचार निर्मूल पार्न घुँडा मुनी गोली हान्ने आदेश दिनु पर्ने बताएका छन् । फेसबुक स्टाटसमा उनले यस्तो अभिब्यक्ति दिएका हुन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारीहरुलाई संगठित अपराधिक समूह घोषणा गरेर कारवाही अभियान थालेको भए के हुन्थ्यो होला ? भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि घुँडा मुनि गोली हान्ने आदेश सरकारले दिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि चैत भित्र भ्रष्टाचार गरेको सम्पति लुरु लुरु आएर बुझाउन अल्टिमेटम दिएको भए कस्तो होला ?
सरकारले गर्नुपर्ने यस्तो हो ।
किनभने भ्रष्टाचार भनेको दुई वा दुई भन्दा वढी मिलेर मात्र गरिने अपराध हो । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वदनाम गरिरहेकोछ । यसले नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि शान्तिपूर्ण तरिकाले डकैति गरिरहेकोछ । यस्तो अपराधमाथि सरकारले प्रतिवन्धको घोषणा गरेर ठुलो प्रहरी अपरेशन गर्नु पर्दथ्यो ।
यसो गरेको भए भ्रष्टाचारीहरु अहिले भागाभाग भैसकेका हुनेथिए ।
कयौं भ्रष्टाचारीहरु गिरफ्तार भैसकेको हुनेथियो । कयौंले आत्मसमर्पण गरिसकेको हुनेथियो । कयौं भ्रष्टाचारीहरु सुरक्षाकर्मीहरु संगको दोहोरो मुठभेडमा घाइते भैसकेको हुनेथियो । भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको सम्पतिमा मोजमस्ती गरिरहेका भ्रष्टाचारीका श्रीमान श्रीमती छोरा छोरीहरुमा रुवावासी चलिरहेका हुनेथियो ।
नेपालका वहुसंख्यक जनतामा खुशीयालीको लहर आउने थियो । सरकारको जयजयकार भैरहेको हुनेथियो ।
तर सरकारले अहिले सम्म यस्तो हिम्मतीलो घोषणा गर्न सकेको छैन । चाहेको छैन । यसको गम्भीर रहस्य समयक्रममा खुल्दै जानेछ ।